ကန်စွန်းဥ စားသင့်တဲ့ အကြောင်းရင်း… – Trend.com.mm
ကန်စွန်းဥကို ဘာကြောင့် စားသုံးသင့်သလဲဆိုတဲ့ အချက်များကတော့….
– နှလုံးတိုက်ခိုက်ခံရခြင်းကို ကာကွယ်ပေးနိုင်သော ဗီတာမင် B6 ကြွယ်ဝစွာ ပါရှိခြင်း
– အရေပြားတင်းရင်း၊ နုပျိုမှုကို ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်သော ကိုလေဂျင် အမျှင်များကို ထုတ်လုပ်ပေးရာတွင် ကူညီပေးသော ဗီတာမင် C များ ပါဝင်နေခြင်း
– ဗီတာမင် D ပါဝင်ခြင်း၊ ထိုဗီတာမင်သည် စွမ်းအင်ပမာဏ၊ စိတ် အခြေအနေ၊ အရိုးများ တည်ဆောက်ခြင်း၊ နှလုံး၊အရေပြား၊ အာရုံကြောနှင့်သွားကျန်းမာရေး တို့တွင် အရေးကြီးသည့် အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်နေခြင်း
– သွေးဖြူဥများ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ စိတ်ဖိစီးမှုများ လျော့ကျခြင်း၊ ခုခံအားစနစ် ကောင်းမွန်ခြင်း စသည့် အကျိုးကျေးဇူးများကို ပေးစွမ်းနိုင်သော သံဓာတ်၊ စိတ်ဖိစီးမှုများကို ပြေလျော့စေနိုင်သော မဂ္ဂနီစီယမ်ဓာတ်၊ နှလုံးခုန်နှုန်းနှင့် အာရုံကြော သတင်းပေးပို့ချက် များကို ထိန်းညှိပေးသော ပိုတက်စီယမ်၊
– သဘာဝ သကြားဓာတ်များ ပါရှိပြီး သွေးကြော ထဲသို့ ဖြည်းညင်းစွာ ထုတ်လွှတ်နိုင်ခြင်း
– ကင်ဆာရောဂါကို မောင်းထုတ်ပြီး အသက်အရွယ် အိုမင်းခြင်းကို တွန်းလှန်ကာ ကွယ်နိုင်သော ကယ်ရိုတီးနွိုက် ဓာတ်များ ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်ခြင်း
– ချက်ပြုတ်နည်း အမျိုးမျိုး ပြုတ်ခြင်း၊ ချက်ခြင်း၊ ဟင်းချို သို့မဟုတ် ကြော်ခြင်း စသည်ဖြင့် ပြင်ဆင်ကာ စားသုံးနိုင်ခြင်း စသည်တို့ဖြစ်ပါတယ်။
ကနျစှနျးဥကို ဘာကွောငျ့ စားသုံးသငျ့သလဲဆိုတဲ့ အခကျြမြားကတော့….
– နှလုံးတိုကျခိုကျခံရခွငျးကို ကာကှယျပေးနိုငျသော ဗီတာမငျ B6 ကွှယျဝစှာ ပါရှိခွငျး
– အရပွေားတငျးရငျး၊ နုပြိုမှုကို ထိနျးသိမျးပေးနိုငျသော ကိုလဂေငျြ အမြှငျမြားကို ထုတျလုပျပေးရာတှငျ ကူညီပေးသော ဗီတာမငျ C မြား ပါဝငျနခွေငျး
– ဗီတာမငျ D ပါဝငျခွငျး၊ ထိုဗီတာမငျသညျ စှမျးအငျပမာဏ၊ စိတျ အခွအေနေ၊ အရိုးမြား တညျဆောကျခွငျး၊ နှလုံး၊အရပွေား၊ အာရုံကွောနှငျ့သှားကနျြးမာရေး တို့တှငျ အရေးကွီးသညျ့ အခနျးကဏ်ဍမှ ပါဝငျနခွေငျး
– သှေးဖွူဥမြား ထုတျလုပျခွငျး၊ စိတျဖိစီးမှုမြား လြော့ကခြွငျး၊ ခုခံအားစနဈ ကောငျးမှနျခွငျး စသညျ့ အကြိုးကြေးဇူးမြားကို ပေးစှမျးနိုငျသော သံဓာတျ၊ စိတျဖိစီးမှုမြားကို ပွလြေော့စနေိုငျသော မဂ်ဂနီစီယမျဓာတျ၊ နှလုံးခုနျနှုနျးနှငျ့ အာရုံကွော သတငျးပေးပို့ခကျြ မြားကို ထိနျးညှိပေးသော ပိုတကျစီယမျ၊
– သဘာဝ သကွားဓာတျမြား ပါရှိပွီး သှေးကွော ထဲသို့ ဖွညျးညငျးစှာ ထုတျလှတျနိုငျခွငျး
– ကငျဆာရောဂါကို မောငျးထုတျပွီး အသကျအရှယျ အိုမငျးခွငျးကို တှနျးလှနျကာ ကှယျနိုငျသော ကယျရိုတီးနှိုကျ ဓာတျမြား ကွှယျဝစှာ ပါဝငျခွငျး
– ခကျြပွုတျနညျး အမြိုးမြိုး ပွုတျခွငျး၊ ခကျြခွငျး၊ ဟငျးခြို သို့မဟုတျ ကွျောခွငျး စသညျဖွငျ့ ပွငျဆငျကာ စားသုံးနိုငျခွငျး စသညျတို့ဖွဈပါတယျ။